Banyere Anyị - ZhangZhou Ezigbo Bubata na Export Co., Ltd.
Ekwentị / WeChat / WhatsApp: + 8615260692977
Mkpọ Sweettọ ọka
Mkpọ Akwukwo nri
Dum Production Line ngwọta
Ezigbo ụlọ ọrụ, yana ihe karịrị afọ 10 na mbubata na mbupụ azụmahịa, na-etinye akụkụ niile nke akụ na ịdabere na ihe karịrị afọ 30 na ahụmịhe nri, anyị na-enye ọ bụghị naanị ngwaahịa nri dị mma ma dị mma, kamakwa ngwaahịa metụtara nri - nri ngwugwu na igwe nri.
Ilekwasị anya na yinye si ugbo na table, Ezigbo Company na-agba mbọ ka nọgidere na-enye mma na-adịghị ize ndụ nri ngwaahịa na ọkachamara nri nkwakọ na nri ígwè ngwọta maka anyị ahịa iji nweta mmeri-mmeri.
Ihe omuma anyi
Na ụlọ ọrụ magburu onwe ya, anyị na-achọ ịdị mma n'ihe niile anyị na-eme. Na anyị na nkà ihe ọmụma na-eme ihe n'eziokwu, ntụkwasị obi, muti-uru, mmeri-mmeri, Anyị e wuru elu ike na-adịgide adịgide mmekọrịta na anyị na ndị ahịa.
Ebumnobi anyị bụ karịa gafere ndị ahịa anyị. Ọ bụ ya mere anyị ji agbasi mbọ ike ịnọgide na-enye ndị ahịa ngwaahịa dị elu, kacha mma tupu ọrụ na ọrụ maka ngwaahịa anyị ọ bụla.
Zhangzhou magburu onwe Import & Export Company dị na Zhangzhou obodo, nso Xiamen, Fujian n'ógbè na China. E guzobere ụlọ ọrụ anyị na 2007 na ebumnuche nke mbupụ na nkesa ihe oriri.
Zhangzhou Ezigbo ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na mba nri ahịa. Companylọ ọrụ anyị wuru aha ya dị ka onye na-eweta ngwaahịa dị mma ma dị elu. Ndị ahịa si Russia, Middle East, Latin America, Africa, Europe na ụfọdụ mba Asia na-enwe afọ ojuju na ngwaahịa anyị. Inwe na-eduga onu nkà na ụzụ ike, anyị na-anọ iji na-emepụta dịgasị iche iche nke magburu onwe foodstuff na-enye ndị ahịa anyị ngwọta na nhọrọ unrivaled na uru, àgwà na ntụkwasị obi.